Wasaaradda Qorshaynta Puntland oo Bilowday la xisaabtanka Hay’adaha ka shaqeeya Puntland – Radio Daljir
Juunyo 1, 2015 4:01 b 0
Isniin, June 01, 2015 (Daljir) — Wasarada Qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Puntland ayaa maanta oo Isniin ah 1-da Juun bilowday la xisaabtanka hay’adaha caalamiga ee ka shaqeeya deegaanadda Puntland, taasoo wax looga waydiin doono lixdii bilood ee lasoo dhaafay sanadkan waxa u qabsoomay iyo waxaan u qabsoomin.
Hay’adda World Vision ayaa lagu bilaabay la-xisaabtanka waxana sidoo kale kasoo qayb galay 8-xarumo dowladeed oo isagu jira Hay’addo iyo wasaarado oo la shaqeeya Hay’addan lala xisaabtamayo maanta.
Marka uu soo dhammaaday kulankan la xisaabtanka ah waxaa la hadlay warbaahinta Agaasimaha Cabdalle Aadan Cabdi, wuxuna sheegay wasaradda Qorshaynta inay bilowday la-xisaabtanka hay’addaha kuwaasoo kor u dhaafaya afartan xarumood, ujeedada laga lee yahayna wuxuu ku sheegay sidii loo ogaan lahaa waxay dalka ka qabteen lixdii bilood ee lasoo dhaafay iyo waxa aysan qaban ee u harsan sanadkan.
Agaasimahan ayaa sheegay World Vision inay maanta soo bandhigtay waxay Puntland ka qabato oo ay ka mid yihiin Caafimaadka, waxbarashadda, haweenka iyo taageeradda shacabka, sidoo kale waxa uu sheegay masuulkan inay kormeer kusoo samayn doonaan waxqabadka Hay’addaha ay soo bandhigayaan loosoo arko oo loosoo qiimeeyo.
Puntland ayaa sanadk kasta la xisaabtanta Hay’addaha caalamiga ah ee ka shaqeeya Puntland kuwaasoo u kala qaybsan kuwa taageera Wasaradaha iyo hay’addaha maxaliga ah iyo kuwa barnaamijyo si toos ah u fuliya.